शरद ऋतु बल - विद्यालयमा परंपरागत, gymnasiums र lyceums रोचक प्रतियोगिताहरूमा आयोजित। र, सामान्य रूपमा आफ्नो रानी चुनिएको छ। मूल वेशभूषा देखाउन पढ्ने कविता, नृत्य: स्वाभाविक, प्रतियोगिहरु मुकुट लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
प्रविधि कार्यान्वयन शरद ऋतु outfit
त्यहाँ कसरी बल मा शरद ऋतु पात बाट पोशाक बनाउन धेरै विकल्प छन्। उदाहरणका लागि, यसरी। यो एक अवस्थित आदेश, प्राथमिकताको सरल प्रत्यक्ष शैली सुरु हुन्छ। को समाचार पत्र उहाँलाई लागि ध्यान दिएर कभर गरे। तपाईं मात्र obtyanut कागज स्कर्ट सक्छन्। अब रंगीन पत्ते टाइप गर्नुहोस्। सुकेको भन्दा अलिकति, ताजा, चम्किलो छनोट गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यस मामला मा, आफ्नो पोशाक शरद ऋतु बल मा पात बाट बनेको छ, सुरुचिपूर्ण रंगीन प्राप्त। एक "प्राकृतिक सामाग्री", फीका छैन नभएसम्म सुट "सिलना" हुनेछ र तिहार मा प्रदर्शित कालो, एक समयको लागि सक्रिय छैन। पाठ्यक्रम रूख प्रजाति सन्दर्भमा, पहिलो र मुख्य संग, मेपल र प्रयोग Aspen पात। तिनीहरूले पूर्णतया वर्ष को यो समय को उत्सव वातावरण व्यक्त। हो, र धेरै texturally, शानदार हेर्न। विभिन्न कागती को नाजुक कागति पहेंलो, यी सुन सिक्का सन्टी पात चमक। को खैरो रंग बेवास्ता छैन, र तिनीहरूले सजिला मा आउनुहोस्। र पनि हरियो - रंग, पनि, शरद ऋतु मा निहित छ! घर बाहिर क्रमबद्ध र पात को एक अद्भुत पोशाक बनाउन बस सकेसम्म धेरै सङ्कलन। शरद ऋतु बल मा आफूलाई सजाने। बरु, मोती र कान को बाली, अन्य आभूषण, हात मा नै सामाग्री प्रयोग: rowan, viburnum, जामुन र जामुन एक्लै संग rosehip शाखा को bunches रोज्नुहोस्। यो सबै धन तपाईंले रानी को उच्च स्थिति अनुरूप, सुन्दर आभूषण बनाउन। प्रशिक्षण पूरा भएपछि, तपाईं बल मा शरद ऋतु पात आफ्नो पोशाक निर्माण गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ!
रानी गर्न विद्यार्थी देखि
गरेको यस bodice सुरु गरौँ। सानो सन्टी र Willow पात छानेर, आस्तीन, को छाती मा उनलाई nasheyte। आविष्कार पछ्याउँछन् वा कुनै पनि क्रममा यो गर्न। वा rowan कुकुर गुलाब - घाँटी तपाईं एक हार लगाउने किनभने, यो ज्यादा छैन। एक स्वाद, भद्दा छैन संग पात बनेको एक पोशाक कसरी बनाउने आधारभूत सिद्धान्तहरू, - अनुपात एक अर्थमा राख्न। तर यो माला, आफ्नो छाती अलि rowan grozdochku मा पिन साथै एकदम सम्भव छ। केश मा बुना बढी शाखा, मेरो कपाल मा प्वाल पार्ने काम। अब स्कर्ट। यो संग राम्ररी काम गर्न पाउनेछन्। जो पात बाट प्राप्त हुन सक्छ तपाईं शीघ्र तस्वीर लुगा। कागज आधारित गोंद पातहरु तपाईं पनि अन्य एक superimposing गर्न सक्नुहुन्छ, बाक्लो छन्। पातहरु को किनाराको, त्यसपछि तिनीहरूले थप प्राकृतिक हेर्नेछौं मुक्त रहनेछ। एक कांस्य वा सुन - तपाईं बल को रानी बन्न जाँदैछन् देखि, तपाईं कहिलेकाहीं स्प्रे मोटर वाहन रंग देखि उनको outfit छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, तपाईं शब्द को पूर्ण अर्थमा मा चमक हुनेछ! यसरी आधारभूत पृष्ठभूमि सुरक्षित, सजावट गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। सहायक फेरि, मश को जामुन ले, बिट सुरम्य विकार तिनीहरूलाई गोंद। यहाँ र त्यहाँ, फिट र शरद ऋतु फूल। यो उद्देश्य लागि, उपयुक्त मुख्यतया asters - तिनीहरूले एक लामो समय को लागि पानी बिना एक ताजा उपस्थिति राख्ने छन्।
तपाईँले सिध्याएपछि, राम्ररी, परिणाम निरीक्षण कमजोरीको tweak, ड्रेस अप र बल जान स्वतन्त्र महसुस: विजय तपाईंको लागि प्रदान गरिएको छ!
आफ्नो हातले एक स्कर्ट कसरी सी गर्न?
Peony मनका: फोटो, बुनाई योजना, शुरुआती लागि मास्टर वर्ग
Plasticine को सरल आवेदन
घरमा लसीका ड्रेनेज मसाज
मानिस इच्छा जीवन अनुभव
नङ मा पुतली आदर्श कलम बनाउन!
मस्तिष्क सानो ट्युमर: उपचार
कि Freudian सिद्धान्त लुकाउँछ?
कोरल बीच रिजर्ट टायर4* (शर्म अल शेख, मिश्र): वर्णन, समीक्षाहरू
शिल्प निर्माण गर्न दुई तरिकाहरू: आफ्नो हातमा प्लास्टिक बोतल को बँदेल